हात्तिपाइले रोग निवारणका लागि कोहलपुर ६ मा विद्यार्थीद्धारा र¥याली – Halchal Khabar
२६ माघ २०७६, आईतवार १७:०४ February 9, 2020 No Comment on हात्तिपाइले रोग निवारणका लागि कोहलपुर ६ मा विद्यार्थीद्धारा र¥याली
२०७६ माघ २६ कोहलपुर बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ मा आइतबार हात्तिपाइले रोग निवारण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा बाँके जिल्ला जनस्वास्थ्यकोे संयुक्त आयोजनमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । हात्तिपाइले रोग बाँके जिल्लाको सबै भन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ रजेनामा देखिएको थियो । आइतबार विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरुले हात्तिपाइले रोग निवारणका लागी सबैले समयमै औषधी सेवन गरौँ भन्ने मुल नाराका साथ कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ६ रजेना गाँउमा र¥याली समेत निकालेका थिए ।सप्ताह व्यापी रुपमा संचालन हुने हात्तिपाइले रोग विरुद्धको औषधी खुवाउने अभियान अन्र्तगत स्थानिय तहका महिला स्वयमसेविका ,स्वास्थ्यकर्मीहरु घर घरमा गएर औषधी खुनाउने कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ । हात्तिपाइले रोग निवारण औषधी सेवन कार्यक्रममा राजनैतिक दल ,स्वास्थ्यकर्मी,जनप्रतिनिधी,विद्याथी,समाजसेवी, महिला स्वयमसेविका लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
यस अघि बाँकेमा ९औं पटकसम्म औषधि खुवाई सकिएको छ । हात्तीपाइले (फाइलेरिया) रोग विरुद्ध औषधि ६ पटकसम्म खाए पुग्छ । तर बाँकेमा प्रभावकारी रुपमा औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा ९औं पटकसम्म खुवाउदा पनि यो रोगका विरामी भेट्टिएका छन् । औषधि सेवन पछि केही असर नगर्ने भन्दै आम नागरिकलाई औषधि सेवन गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।